शनिवार, आश्विन १०, २०७७ ०१:०६:४२ युनिकोड
कर्णाली प्रदेशले १७ लाख ७० हजारको जीवन विमा र १० हजार घरको निर्जीवन विमा गर्नेछ
बिहिवार, आश्विन २, २०७६ यार्सान्यूज
कर्णाली प्रदेश सरकारले लोककल्याणकारी कार्यक्रमका रुपमा सम्पूर्ण कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना विमा बुधबारबाट शुभारम्भ गरेको छ । १७ लाख ७० हजार नागरिकको जीवन विमा र १० हजार घरको निर्जीवन विमाको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसँग यार्सान्युजले संवाद गरेकोे छ । उहाँसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र विमा कम्पनीको प्रतिनिधिवीच समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर सारा कर्णालीवासीको दुर्घटना विमा गर्ने कार्य बुधवार शुभारम्भ भएको छ ? यो दुर्घटना विमाको वास्तविकता के हो ?
कर्णाली प्रदेश विकट, जटिल र सम्वेदनशील भूगोल भएको प्रदेश हो । भौगोलिक जटिलताले विपदहरु आइरहन्छन् । कर्णालीका जनताहरु विपदसँग हरेक दिन लुकामारी गरिरहेका छन् । जनतालाई राज्यका तर्फबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको हो । हरेक जनताको मनमस्तिष्कमा पुग्न जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व नै जनताको हितअनुकूल कार्य गर्नुमा पुष्टि हुन्छ । यो एक समाजवादी कार्यक्रम पनि हो ।
सामूहिक रुपले एकैचोटी १७ लाख ७० हजार जनताको दुर्घटना विमा गरेका छौँ । यो विमा दुई प्रकारको छ । पहिलो जीवन विमा, त्यसमा १७ लाख ७० हजार जनताको विमा हुन्छ । अर्को निर्जीवन विमा छ, यो विमाअन्र्तगत १० हजार घरको विमा हुन्छ । अव कर्णालीको एउटा कुनै घर विपदका कारण पूर्ण रुपमा भत्कियो भने विमाले ५ लाख रकम उपलब्ध गराउने छ ।
यो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुर्घटना विमाको लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । विमा रकम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्छ । त्यो रकम कसरी व्यवस्था हुन्छ ?
यो कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अझैँ वृहद र समृद्ध गर्दै लैजान्छ । यो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा हरेक बर्ष दुर्घटना विमाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना तर्जुमा हुन्छ । कर्णाली प्रदेशको एक नियमित कार्यक्रमको रुपमा विकास हुन्छ । यो लागू गर्दै जाँदाका अनुभवबाट समृद्ध हुँदै जान्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य विमा लागु गरेको छ । यो कार्यक्रममा उपचार र औषधीमा असन्तुष्टी देखिन्छ । योबाट पाठ सिक्दै दुर्घटना विमालाई प्रभावकारी बनाउन कस्तो संयन्त्रको विकास गर्नुभएकोे छ ?
यो कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विमा संस्थानको सहकार्यमा लागु हुने हो । यसको प्रभावकारीताका लागि मन्त्रालय, जिल्लास्थित विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय नगरपालिका र गाउँपालिका, विपद व्यवस्थापन सहजकर्ताहरु र हरेक नागरिकको सहभागीतामा दुर्घटना जीवन विमा र निर्जीवन विमा प्रभावकारी ढंगले लागु हुन्छ । हामी विपदमा परेका हरेक नागरिकले सहज र सरल ढंगले विमा पाउने व्यवस्था गर्छौँ ।
कर्णालीवासी हरेक नागरिकका लागि जीवन विमा र १० हजार घरका लागि निर्जीवन विमा गर्नुभएको छ । यसलाई अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक नागरिकका लागि ७ रुपैया खर्च गर्छ र प्रति घरका लागि ५०० रुपैया खर्च गर्छ । यही प्रिमियर विमाबाट नै प्रति नागरिकको १ लाख जीवन विमा हुन्छ भने प्रतिघरको लागि ५ लाख विमा हुन्छ । १७ लाख ७० हजार नागरिकको हामी एकैचोटी विमा गर्छौ । यो व्यक्ति व्यक्तिमा गइरहनु पर्दैन । यो सामूहिक विमा हो । कुनै घर विपदमा परी व्यक्तिको मृत्यु भयो भने ५ जनासम्मलाई २५ लाखसम्मको पनि विमा हुन्छ । यो विमा कार्यक्रमले विपदको समयमा वेघरवार हुने र कात्रो नपाई छटपटिनु पर्ने दिनको अन्त्य गर्नेछ ।
हरेक विपदपछि भौतिक, आर्थिक क्षति हुन्छ, त्यसबाट जनतालाई सुरक्षित गर्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो र यसले जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउने छ ।
कर्णाली प्रदेशका सवै नागरिकको विमा हुँदैछ । कर्णालीवासी कोही भारतमा, कोही अरवको खाडीमा काम गर्न जान्छन्, त्यहाँ दुर्घटनामा परेका नागरिकले यो विमाबाट लाभ लिन सक्छन् कि सक्दैनन् ?
यो कार्यविधिमा विदेशमा हुने दुर्घटनालाई त्यति स्पष्ट गरेको छैन तर के हो भने नेपालभरि हुने विपदका हकमा स्थानीय प्रशासनले प्रमाणित गरेमा यो विमाबाट कर्णालीवासीले देशभरिबाट लाभ लिन सक्छन् ।
विपद व्यवस्थापनकै कुरा गर्दा कर्णाली प्रदेशमा वाढी पीडित, अग्नीपीडितहरुको समस्या छ ? त्यसलाई कसरी हल गरिरहनु भएको छ ?
२०७१ सालको बाढीबाट १ हजार ४५ जना नागरिक सुर्खेतमा पीडित भएको तथ्यांक छ । यी वाढी पीडितले निकै कष्टकर जीवन जीइरहेको स्थिति थियो । यो कर्णाली प्रदेशमा एउटा क्रोनिक समस्या जसरी खडा भएको थियो । वाढीपीडितहरुलाई पालबाट सुरक्षित आवासमा ल्याउनका लागि भवन निर्माणका लागि तीन/तीन लाख दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा गैसकेका छौँ । यो अभियानात्मक ढंगले अघि बढेको छ । अहिलेसम्म झन्डै साँढे ६ सय जना पीडितलाई डेढ/डेढ लाख उपलब्ध गराइसकेका छौँ । वाढीपीडितहरु भवन निर्माणमा जुटिरहेका छन् । दोस्रो र तेस्रो किस्तामा हामी तीन लाख उपलब्ध गराउँछौँ ।
कालिकोटमा अग्नीपीडितहरु, हुम्लाका अग्नीपीडितहरु छन् । तिनको समस्या समाधानमा कर्णाली प्रदेश सरकारले असमान व्यवहार गरेको पनि भनिन्छ । यसको वास्तविकता के हो ?
पहाडमा निर्माण सामाग्रीको महंगी तथा असुविधालाई ध्यान दिंदै रकमको मात्रामा तलमाथि भएकै छ । सुर्खेतमा जसरी निर्माण सामाग्री सहज ढंगले उपलब्ध हुन्छ, हुम्लामा त्यसरी हुँदैन । कालीकोटमा त्यसरी उपलब्ध हुँदैन । त्यसैले कालीकोटका अग्नीपीडितलाई जुन निर्णय गरिएको छ । भूगोल र जटिलताका आधारमा समन्यायिक नै छ ।
अन्त्यमा दुर्घटना विमा सम्बन्धी केही भन्नु छ ?
सम्भवतः सरकारले एकैचोटी हरेक नागरिकको विमा गरिदिएको यो एसियाकै नमूना कार्यक्रम हो । विपद व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरु गठन भएका छन् । ती सक्रिय हुनुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष वा मेयरको नेतृत्वमा समिति हुन्छ । विपद व्यवस्थापनका सवैखाले सहजकर्ताहरु, विपदविद्हरु सवैले यो कार्यक्रम लागु गर्न पहल लिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, आश्विन २, २०७६, ०८:२९:००